Free Thinker: CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၃)
CPF နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
ကျွန်တော်ကား စီးပွားရေးပညာတွင် နလဗိန်းဒုံးဖြစ်၏။ စီးပွားရေး အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုံးများကို ဘယ်လိုချောအောင် ဘာသာပြန်ရမည်မသိ။ ယခု ကျွန်တော်နားလည်သလောက် ဘာသာပြန်ပြပါမည်။ မှားနေလျှင် ထောက်ပြ ပြင်ဆင် ပေးကြပါခင်ဗျား။
CPF ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်သုံးရန် CPFIS Scheme ဆိုတာ လုပ်ပေးထားပါသည်။
CPFIS Scheme ဟူသည် CPF Investment Scheme ဖြစ်၏။ ဤတွင် CPF Ordinary Account မှ သုံးသော CPFIS-OA နှင့် CPF Special Account မှ သုံးသော CPFIS-SA ဟု နှစ်မျိုးရှိပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤသို့ရင်းနှီးလိုက်ခြင်းသည် အသက်ကြီးလာသောအခါ (သာမန်အတိုးထက်) ငွေစကလေးများ ပိုများရလာလေမလားဟု စွန့်စားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်မှ သေချာပေါက်မြတ်ပါမည်ဟု မည်သူကမှ အာမမခံနိုင်။ မည်မျှရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်နည်း။ မည်မျှလောက်ထိ အရှုံးခံနိုင်မည်နည်း စသည်တို့ကို မိမိဘာသာ ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအတွက် CPF Board အဖွဲ့သည် မည်သူ့ကိုမှ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ထားခြင်း မရှိပါ။ အလွန်သေချာလှသောနည်းမှာကား ထိုပိုက်ဆံကို မတို့မထိဘဲထားခြင်းဖြင့် ရလာသည့်အတိုးက နည်းပင်နည်း သော်ငြားလည်း ပိုပြီးသေချာပါသည်။
CPFIS ကိုဘာလို့ ထားပေးရတာလဲ?
CPF ပိုက်ဆံများကို သည်အတိုင်းအိပ်နေမည့်အစား စွန့်စားလိုသူတို့အတွက် မိမိတို့အသက်ကြီးလာသောအခါ ငွေပင်ငွေရင်း ကလေး ဖြစ်လာစေရန် ဥ ကလေး ဥ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါ၏။ ထိုဥကလေးမှ အကောင်လေးပေါက်၊ နောက်ထပ် ဥ ကလေးများ ဥ စသဖြင့် တိုးပွားသွားလျှင်တော့ ကောင်းလေစွ။ ဥ ထားသော ဥ ကလေးမှာ ပုပ်သွားလျှင်တော့ ကံ ကိုသာပုံချလိုက်ပါ။
CPFIS Scheme အောက်မှ မည်သည့်နေရာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သနည်း။
လွဲကုန်မည်စိုး၍ ကျွန်တော်ဘာသာမပြန်တော့ပါ။ မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
v Shares and loan stocks,
v unit trusts,
v government bonds,
v statutory board bonds,
v bank deposits,
v fund management accounts,
v endowment insurance policies,
v investment-linked insurance policies (ILPs),
v exchange traded funds (ETFs)
ကျွန်တော်ကား စီးပွားရေးကိစ္စတွင် အတော်ချာတူးလန်သူ ဖြစ်၏။ ကျွန်တော်လုပ်လိုက်သမျှ တစ်ခါဖူးမျှ မြိုးမြိုးမျက်မျက် စားရသည်မရှိ။ စုငွေလေးများသာ ပဲ့ ပဲ့ သွားခဲ့သည်ချည်းဖြစ်၏။ အထက်တွင် သူတို့ပြောထားသည့်စာရင်းထဲမှ ကျွန်တော် အနည်းငယ် စိတ်ချသည်မှာ ရွှေဝယ်ခြင်း နှင့် ဘဏ်ထဲထည့်ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ အာမခံလည်း ၀ယ်ဖူးပါသည်။ အဲလေ ၀ယ်ထားသည်ဆို ပိုမှန်ပါသည်။ သို့သော် ၀ယ်ပြီးခါမှ မှားပြီလားဟု နောင်တလည်း ရနေ၏။ အဲလေ မမှားပါဘူးဟုလည်း စိတ်ပြန်ဖြေရ၏။ အခြားဟာတွေတော့ မပြောတတ်ပါ။ လုပ်ဖူးသူများသာ သိပါလိမ့်မည်။
CPF စုငွေများထဲမှ မည်မျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သနည်း?
Instruments that can be invested under CPFIS
Ordinary Account savings can be invested in:
Special Account savings can be invested in:
Statutory Board Bonds (Secondary Market only)
Selected Investment-Linked Insurance Products*
Selected Unit Trusts*
Up to 35% of investible savings** can be invested in:
Property Funds (or real estate investment trusts)
Up to 10% of investible savings** can be invested in:
· Gold ETFs
· Other Gold products (only UOB offers these new gold products)
**Investible savings is the sum of your Ordinary Account balance and the amount of CPF which you have withdrawn for investment and education.
Ordinary Account မှ ၂၀၀၀၀ ထက်ပိုသော၊ Special Account မှ ၄၀၀၀၀ ထက်ပိုသော ပိုက်ဆံများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင် ပါသည်။ သို့သော်လည်း အာမခံပေးခြင်းများအတွက်ကိုမူ Ordinary Account မှ ၂၀၀၀၀ ထက် နည်းလျှင်လည်း ပေးနိုင်ပါသည် ဆို၏။
သင်၏ CPF ပိုက်ဆံများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည့် unit trusts, investment-linked insurance products and exchange traded funds ကို သိလိုလျှင် အနီချယ်ထားသော စာလုံးများပေါ် ကလစ်ခေါက်၍ ကြည့်ပါလေ။
CPFIS ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မည်သူများပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
၁။ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူ
၂။ Bankrupt မဖြစ်သူ။
၃။ CPFIS-OA အတွက် Ordinary Account ထဲတွင် စုငွေ ၂၀၀၀၀ ထက်ပိုရှိသူ
၄။ CPFIS-SA အတွက် Special Account ထဲတွင် စုငွေ ၄၀၀၀၀ ထက်ပိုရှိသူ
CPFIS ကို ဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ ?
CPFIS-OA အတွက် -
၁။ CPFIS အေးဂျင့်ဘဏ်များဖြစ်သောDBS, OCBC, UOB ဘဏ်တစ်ခုခု၌ CPFIS Investment Account ဖွင့်ပါ။ သို့သော် ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမူ UOB ဘဏ်တစ်ခုကသာ လုပ်ပေးပါသည်။ Account ဖွင့်ရန် IC Card နှင့် CPF Statement ယူသွားပါ။
၂။ ဘဏ်က CPF Board နှင့် သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများသို့ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်က ၎င်းတို့နှင့် မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနှင့်။
၃။ တစ်ချိန်လျှင် CPFIS Investment Account တစ်ခုသာ ဖွင့်နိုင်သည်။
၁။ CPFIS-SA အတွက် ဘာ account မှဖွင့်ရန်မလိုပါ။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသည့် ကုမ္ပဏီများသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ သင့် IC Card နှင့် CPF Statement လိုပါလိမ့်မည်။
၂။ CPF Board က သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ကုမ္ပဏီများသို့ ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။ သင်က ၎င်းတို့နှင့် မျက်ခြေမပြတ်ပါစေနှင့်။
ဒါဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဆိုတာ ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေလဲ?
Service/Product Providers Included Under the CPF Investment Scheme (CPFIS)
1. DBS Bank Ltd
2. Malayan Banking Berhad
3. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
4. United Overseas Bank Ltd
2. Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd
3. United Overseas Bank Ltd
1. American International Assurance Co Ltd
2. Aviva Ltd
3. AXA Life Insurance Singapore Pte Ltd
4. Great Eastern Life Assurance Co Ltd
5. HSBC Insurance (Singapore) Pte Ltd
6. Manulife (Singapore) Pte Ltd
7. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd
8. Overseas Assurance Corporation Ltd
9. Prudential Assurance Co Singapore Pte Ltd
10. Tokio Marine Life Insurance Singapore Ltd
1. iFAST Financial Pte Ltd
2. Navigator Investment Services Ltd
3. Phillip Securities Pte Ltd
1. Aberdeen Asset Management Asia Ltd
2. AllianceBernstein (Singapore) Ltd
3. Allianz Global Investors Singapore Limited
4. Amundi Singapore Limited
5. APS Asset Management Pte Ltd
6. AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Ltd
7. Capital International, Inc
8. DBS Asset Management Ltd2
9. Deutsche Asset Management (Asia) Ltd
10. FIL Investment Management (Singapore) Limited
11. First State Investments (Singapore) 2
12. Fullerton Fund Management Company Ltd
13. Goldman Sachs (Singapore) Pte
14. Henderson Global Investors (Singapore) Ltd
15. HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited2
16. Lion Global Investors Limited
17. Manulife Asset Management (Singapore) Pte Ltd
18. NTUC Income Insurance Co-operative Ltd1
19. PineBridge Investments Singapore Ltd
20. Prudential Asset Management (Singapore) Ltd
21. Schroder Investment Management (Singapore) Ltd2
22. State Street Global Advisors Singapore Ltd
23. Templeton Asset Management Ltd
24. UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd
25. UOB Asset Management Ltd2
26. Western Asset Management Company Pte Ltd
1can only manage investment-linked insurance sub-funds under CPFIS
The remaining FMCs can manage unit trusts, ILP funds/ sub-funds, exchange traded funds and may offer fund management accounts under CPFIS subject to the Board’s approval.
2FMCs which offer Fund Management Account services.
Local Representative of Recognised Funds
1. Navigator Investment Services Ltd
2. AXA Wealth Management Singapore Pte Ltd
၀န်ခံချက်။ ။ မိတ်ဆွေများခင်ဗျား။ အထက်တွင် ကျွန်တော်ဝန်ခံခဲ့သကဲ့သို့ ကျွန်တော်ကား စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ နကန်းတစ်လုံးမှ နားလည်သူမဟုတ်ပါ။ ယခုရေးနေသည်မှာ နားလည်တတ်ကျွမ်းလှ၍ မဟုတ်ဘဲ CPF Website ၌ ပါသည်တို့ကို ဘာသာပြန်နေခြင်းမျှသာဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဲဒီကုမ္ပဏီတွေက ဘာတွေလုပ်သလဲ၊ သူတို့ဆီမှာ မြှုပ်နှံရင် ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရမလဲ စတာတွေကို ကျွန်တော်အနည်းငယ်မျှမသိပါကြောင်း မိတ်ဆွေတို့ကို အသိပေးလိုပါသည်။
CPFIS-OA နဲ့ CPFIS-SA ဘာတွေကွာသလဲ?
CPFIS-OA အတွက် Ordinary Account ထဲမှ စုငွေများကိုသာ သုံးနိုင်ပါသည်။ CPFIS-SA အတွက် Special Account ထဲမှ စုငွေများကိုသာ သုံးနိုင်ပါသည်။ လုပ်ပုံလုပ်နည်း၊ ခံစားခွင့်စသည်တို့လည်း ကွာခြားပါသည်။ ဘာတွေကွာသလဲ သိရအောင် သူတို့ပေးထားသော link ကိုဖွင့်ကြည့်သော်လည်း မရပါ။ အောက်တွင် မူရင်းထည့်ပေးလိုက်ပါသည်။
To find out how much CPF savings you can invest and what instruments you can invest in, please click here.
ဒါဆိုရင် CPF စုငွေတွေကနေ ကျွန်ုပ် အဘယ်မျှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသလဲ တဲ့ ?
CPF website မှ သင်၏ my cpf Online Services သို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် SingPass ဖြင့် ၀င်ပါ။ ထို့နောက် My Statement တွင် ကြည့်ပါ။ သင့် CPF Account သုံးခု၌ စုငွေ မည်မျှ ရှိသည်။ မည်ရွေ့မည်မျှ သုံးပြီးသွားပြီ။ မည်ရွေ့မည်မျှ invenstment လုပ်လို့ရမည်။ ပညာရေးအတွက် မည်မျှသုံးနိုင်မည် စသည်တို့ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ပါ ကျွန်တော့် My Statement နမူနာကိုကြည့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ CPF ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်းမှာလည်း အလွန်အင်မတန် များပြားလှပါသည်။ ကျွန်တော်ဆက် လျှာမရှည်တော့ပါ။ ငွေစကလေးများ တိုးပွားရန် စိတ်ဝင်စားသူတို့ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော Service/Product Providers များနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။ ယခု CPF ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအကြောင်း ဤတွင် နားပါမည်။
၂၇-၁-၂၀၁၂ ည ၁၀ နာရီ ၅၁ မိနစ်
Posted by အေးငြိမ်း at 11:04 PM
CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (4)
CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂)
CPF အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
တစ်သုံးလုံး အခမဲ့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်
ကျွန်တော်တို့တော၌ သေခြင်းကိစ္စ လွယ်ကူလှပုံ
စင်ကာပူတွင် လူများသေဆုံးသောအခါ အသုဘအခမ်းအနားအပြီး ...
ကွာခြားနေတဲ့မျက်နှာများ၊ ဒီကနေ့မြန်မာလူငယ် နဲ့ ကျွ...
လူတစ်ဦးသေလျှင် စင်ကာပူ၌ မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ကြရသန...
စင်ကာပူရောက် ပရဟိတအဖွဲ့များစုကာ မြွေဆိပ်ဖြေဆေး လှူဒ...
စင်ကာပူတွင် အိမ်ဝယ်ခြင်း အသေးစိတ်
ခရစ္စတိုဖာ ပေါက်ကျိုင်း ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ (၁၄)